Ugcagcelwe esehlale nomkakhe iminyaka engama-72 | News24
Ugcagcelwe esehlale nomkakhe iminyaka engama-72
Umndeni wonke usuphelele uzobungaza usuku olukhulu lukaBhishobhi Simon Madlala nonkosikazi wakhe.Izithombe: Thami Ka-Nkosi
BEZIWUSHAYA kufinywa ngendololwane ngesikhathi kugcagca uBhishobhi Simon Madlala no-Angeline Magcaba-Madlala ngoMgqibelo mhla ka-14 kuNtulikazi (July) eMurchison esigodini saKwaMaveshe, asebehlale iminyaka engama-72 bendawonye.
Nakuba imvula ibithanda ukuphazamisa kodwa lokho kubukeke njengesibusiso njengoba bekushaywa ingoma kugiya nezalukazi.
UBhishobhi uMadlala uthe lokhu ukwenze ngoba engafuni isizukulwane sakhe sisale siba nezinkinga njengoba iBhayibheli lisho ukuthi izono zabazali ziwela ezinganeni.
Uthe: “Obekubaluleke kakhulu ukubonga kuMdali ukuthi usengigcine ngaze ngaba kulesi sigaba engikusona futhi ngisadla anhlamvana,”kusho yena.
Uthe ukubambisana okuhle komndeni yikhona okuke kube yisizathu sokuba izinto zihambe kahle zize zifinyelele ezingeni eziyilo.
“Akukho engingathi kuyintando yami njengoba kwenzeke lo mcimbi ebengikade ngiwufisa,” kubeka uBhishobhi.
Uthe usezoke ahlale anethezeke nonkosikazi wakhe weminyaka njengoba esazi ukuthi usiko nezimfanelo sekwenzekile.
UBhishobhi uMadlala uqhube wathi akukho lapho inkolo iphambana khona nesiko kodwa okubalulekile ukuthi konke kwenziwa ngendlela yini futhi kube nesizotha.
Ubeke wathi ayikho imfihlo uma kubhekwa isikhathi asesihlale nonkosikazi wakhe, wathi inhlonipho, ukuthandana, ukubekezelelana nokunakekelana yikhona okubaholele ekutheni bakwazi ukuhlala iminyaka eminingi bendawonye.
Ubonge bonke abadele amakhaza abeshubisa umnkantsha kanye nemvula ukuzobeseka osukwini lwabo olukhulu.